यी महिलाले राखिन् रेकर्ड, १८ महिनासम्म पनि बच्चा कोखमै « Lokpath
यी महिलाले राखिन् रेकर्ड, १८ महिनासम्म पनि बच्चा कोखमै
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७५, बुधबार ०९:०७
काठमाडौं । कोही महिला जब आमा बन्छिन् त कोखमा ९ या दश महिना बच्चा रहने गर्छ । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर एक महिलाको गर्भवती भएको १७ महिना बितिसक्दा पनि डेलिभरी भएको छैन ।
चीनको वाङ सुई नामकी एक महिलाले १७ महिनादेखि गर्भवती हुने रेकर्ड बनाएकी छिन् । उनी सन् २०१७ देखि गर्भवती छिन् ।
यी महिलाको के दावी छ भने उनी १७ महिनादेखि गर्भवती छिन् । गर्भवती भएपछि उनी निरन्तर डाक्टरसँग जाँचका लागि पनि गएकी छिन् । डाक्टरले ती महिलालाई सन् २०१८ मा डेलिभरी हुने डेट दिएका थिए । तर, समय पूरा भएर पनि बच्चा जन्मिएन । १४ औँ महिनामा डाक्टरले बच्चालाई बाहिर ल्याउन नसक्ने बताएका थिए । किनकि भ्रूण अझै पनि परिपक्व भएको छैन ।
वाङ चेकअपका लागि करीब ३० पटक अस्पताल गइसकेकी छिन् । १७ महिना बितिसक्दा पनि बच्चाको शरीरको विकास राम्रोसँग भएको छैन । जसका कारण महिलाले अझै बच्चा पाउन सकेकी छैनिन् । महिलाले जबसम्म बच्चा पूर्ण तयारी हुँदैन, तबसम्म बच्चा नपाउने बताउँछिन् । चीनका डाक्टरले भने १८ औँ महिनामा डेलिभरी हुने दावी गरेका छन् ।
जेसीबी डोजरको रङ किन पहेंलो हुन्छ ? यस्तो छ रहस्य !
काठमाडौं । जेसीबी लेखिएका डोजर, एस्क्याभेटरलगायतका निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेसिनहरु नदेख्ने सायदै
२ सय ३३ यात्रुको ज्यान बचाउने पाईलट, ‘हिरो अफ रसिया’ अवार्डबाट सम्मानित
खाना दिएपछि नमस्कार भन्दै भाँडो थाप्ने कुकुर, मिलेर यसरी बस्छन् लाईनमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कुकुर संसारकै सबैभन्दा इमान्दार तथा बफादार प्राणी मानिन्छ । मानिसले कुकुरलाई
महिलाको शरिरसँग जोडिएको १० रोचक तथ्य, जुन पुरुषसँग हुदैन
१. महिलाको प्रजनन क्षमता पुरुषको भन्दा कम हुन्छ । उनीहरु ४५–५० वर्षसम्म मात्रै